စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရား – Messi Club
တစ်ခါက လူတစ်ယောက်ဟာမိန်းမလှ တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်လိုက်တယ်
ရုပ်လှတဲ့အပြင်စိတ်ထားကလည်းအရမ်းကောင်းတော့အမျိုးသမီးကို အရမ်းချစ်ရှာတယ်။ တစ်နေ့မှာ အမျိုးသမီးဟာ အရေပြားရောဂါ စတင်ခံစားလာရတယ်။ အကြောင်း တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ တစ်ရက်မှာ အမျိုးသားကလည်း အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်ရတယ်။ ခရီးကနေ အိမ်ပြန်လမ်းမှာ car accident ဖြစ်ပြီး မျက်စိနှစ်လုံးစလုံး ကွယ်သွားခဲ့တယ်။
ဒီနေရာမှာ ခဏလောက်ရပ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ရအောင်..အရေပြားရောဂါသည်နဲ့ မျက်မမြင်တယောက် ရဲ့ အိမ် ထောင်ရေးဟာ ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံခရီးဆက်ကျမလဲ? ဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ……?
တကယ်တော့ သူတို့ ၂ ယောက်ကြားမှာ ဘာပြောင်းလဲမှု့မှမရှိခဲ့ပါဘူး။ အရင်လို ပျော်စရာကောင်း ပြီး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတုန်းပဲ။ အချိန်တွေ ကုန်လာတာနဲ့အမျှ အမျိုးသမီးရဲ့ အရေပြားရောဂါဟာလည်း တစ်စ တစ်စနဲ့ ပိုဆိုးလာတယ်။
မျက်မမြင် ယောက်ကျားက သူမိန်းမ အရေပြားရောဂါကြောင့်ရုပ်ပြတ် ဆင်းပြတ် ခံစားနေရတာကိုမသိရှာဘူးထင်ပါရဲ့။ သူတို့ နှစ် ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ဟိုးအရင်ကထက်တောင်တိုးပြီး ပိုလို့ ချစ်မြဲ ချစ်ဆဲ ကြင်နာဆဲပဲ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ အမျိုးသမီးဟာ အရေပြားရောဂါနဲ့ ဆုံးသွားရှာတယ်။ သူ့အတွက်တော့ ကြီးကျယ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုပဲလို့ခံစားရတယ်။မိရိုးဖလာအတိုင်း ဇနီးရဲ့ အလောင်းကို မြေချပြီးနောက်တစ်နေ့ မှာ အမျိုးသားဟာ ဇနီးသည် ခေါင်းချခဲ့တဲ့ မြို့ ကနေ အပြီးအပိုင်ထွက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အဲ့ချိန်မှာ အိမ်နီးနားချင်း လူတစ်ယောက်က စကားလှမ်းပြောတယ် ” ခင်ဗျား မျက်စိမမြင်တဲ့ ကာလတစ်လျှောက်လုံး ခင်ဗျားရဲ့ ဝေယာဝစ္စတွေ အကုန်လုံးကို ခင်ဗျားအမျိုးသမီးက မငြီးမငြူ လုပ်ပေးခဲ့တာ အခု ခင်ဗျားတစ်ယောက်ထဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..ခင်ဗျားတော့ ဒုက္ခ လှလှကြီးတွေ့တော့မယ်”
အမျိုးသားက ပြန်ပြောတယ်။ ” ဒီမှာ မိတ်ဆွေ..အမှန်က ကျွန်တော် မျက်စိမကန်းပါဘူး။ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ အမျိုးသမီးဟာ သူမရဲ့ ရုပ်ဆိုး အကြည်းတန်နေတဲ့ မျက်နှာကို နေ့တိုင်း ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်လို့ သူသိရင် အဲ့ခံစားမှု့ဟာ သူရောဂါဝေဒနာ ခံစားမှုထက်ပိုပြီး နာကျင်လိမ့်မယ်။
ဒါကို ကျွန်တော်မမြင်ချင်ဘူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှတော့ပေမဲ့ သူမ ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အမြဲလှနေသူတစ်ယောက်ပါ။ စိတ်ထားဖြူစင်သူတစ်ယောက်မို့ ကျွန်တော်အတွက် ဇနီးကောင်း တစ်ယောက်ပါ၊ ကျွန်တော်က သူအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပြီး စိတ်ချမ်းသာနေတာကိုပဲ မြင်ချင်တဲ့လူတယောက် မို့ အခုလို ဟန်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လောကကြီးမှာ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ပြေလည် ကောင်းစားဖို့အတွက် တစ်ချို့သောအရာတွေကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပေးရပါတယ်။ အားနည်းချက် ချွတ်ယွင်းချက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိစမြဲ။
ဒါကြောင့် no one is perfect လို့ ဆိုကြတာကိုး။ လူတယောက်ရဲ့ အားနည်းချက် ချွတ်ယွင်းချက်ကို ထောက်ပြီး အနိုင်ယူတာ လူညံ့လူပျော့ တွေရဲ့ လုပ်ရက်ပါ။ အဲ့ထဲမှာ ကိုယ်မပါမိပါစေနဲ့။ တစ်ယောက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကိုတစ်ယောက်က အပြန်အလှန် ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း ရင်ထဲက စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာ တရားနဲ့ သာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကျမယ်ဆိုရင် အရမ်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်။